‘गृहमन्त्री पाए ३ महिनामै आधा अपराध घटाउँछुु :’लालबाबु पण्डित « Amsanchar
‘गृहमन्त्री पाए ३ महिनामै आधा अपराध घटाउँछुु :’लालबाबु पण्डित
मोरङ २ मसीर । मोरङ — ६ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि नवनिर्वाचित सांसद नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानी
चुनावमा विजयी हुँदा कस्तो अनुुभव भइरहेको छ र?
जितपछि पहिलो प्राथमिकता के हो र ?
तपाईंका मुख्य अजेन्डा के–के छन् र?
भर्खर चुनावको रिजल्ट हुँदै छ । अहिले नै कुनै जिम्मेवारी पाएको छैन । अब, रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । पार्टीले जसरी जिम्मेवारी दिन्छ । त्यसपछि मात्रै के काम गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन्छ । पार्टीबाट जिम्मेवारी पाएअनुसार जनताको पक्षमा राम्रा काम गरेर देखाउँछु । गृहमन्त्री बन्न पाए भने ६ महिनामा ५० प्रतिशत अपराध घटाइदिन्छु । राजनीतिक संरक्षणमा रहेका अपराधीहरूलाई जेल चलान गरिदिन्छु । यति गर्न सकिन भने मेरो नामै नलिनुस् । अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएँ भने राजस्व असुुली दोब्बर बनाइदिन्छु । मेरो योजना अनुसार चल्ने हो भने दश वर्षभित्र रोजगारीका लागि कतार गएकाहरू काम गर्न देशमै फर्कने स्थितिमा देशलाई पु¥याइदिन्छु । २० वर्षमा नेपाललाई दातृराष्ट्र बनाउ“छु । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनका आधारमा सम्पन्न भएर पनि परिचालनको नेतृत्व गर्नेको अभावले पछि परेको हो । सिंगापुर जस्तो बलौटे देश त संसारकै विकसित देश भएको छ । नेपाल चाहिँ मगन्ते देशका रूपमा रहरिहने स्थिति अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
हो, सही कुुरा भन्नुभयो । म पहिलोपटक मन्त्री बन्दा एकजना पुराना नेताले नयाँ मन्त्री पुरानाको पछिपछि हिँड्नुुपर्छ भनेका थिए । विदेशीबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले नै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । म मन्त्री भएकै बेला विदेशीले दिएको ऋण अर्थमन्त्रालयबाट अनुदानको रूपमा लिएर घर–परिवारमा करेसाबारी लगाउने कार्यक्रम चलाइएको थियो । घुरेनमा साग रोप्न कुनै तालिम चाहिन्छ रु नचाहिने ठाउ“मा ऋण लिएर खर्च गर्नु सरासर ठगीसिवाय केही हैन । २०५१ सालमा मन्त्री भएका बेला १० करोडको प्रोजेक्ट लिएर एक जना आएका थिए । प्रोजेक्ट स्वीकृत गरेबापत २ करोडको अफर गरेका थिए । परियोजना के थियो भने नाङ्गा डा“डामा रुख रोप्ने । सुुन्दा कति राम्रो योजना तर, मैले अस्वीकृत गरिदिए“ । किनभने, हेलिकोप्टरबाट पहाडका डा“डामा माटो मिसाएर बीउ छर्ने अनि रुख उमार्ने । यसरी बीउ छरेर बिरुवा उम्रिन्छ भनेर सोधेको । ऋण स्वीकृत गर्नुहोस् काम हुन्छ । उम्रे पनि नउम्रे पनि काम देखिएपछि पैसा आइहाल्छ परियोजना ल्याउने व्यक्तिले जवाफ दिएका थिए । यस्ता खालका योजना स्वीकृत गरेर देश डुबाउने काम म गर्दिनँ । अहिले पनि थुप्रै बकमफुसे काम देशभर भइरहेका छन् । यस्ता खाले ठगी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु नै अबको चुनौती हो । देश बिग्रेकै अनियमितताले हो । कागज मिलाउने र बजेट पचाउने प्रवृत्तिले विकास बजेट खर्च नहुने साधारण खर्च भने चुलिँदै गइरहेको छ । विकासका काम कमसल गर्ने र बारम्बार ठेक्का पारेर एउटै काम वर्षैपिच्छे गरेर पैसा कमाइराख्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्ता अनियमितता र विकृतिको अन्त्य नगरेसम्म देशको विकास हुनसक्दैन।
जनताले मलाई विश्वास गरेर मत दिनुभएकामा आभार व्यक्त गर्छु । ममाथि जनताले आशा र विश्वास पनि गरेका छन् । जनताको आशा र विश्वास पूरा गर्ने मेरो संकल्प छ । नकारात्मक कम र सकारात्मक बढी सोच्नुस् । परिवर्तन अहिले नै सम्भव छ । अब, देश आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । नागरिक बाट ।